संविधानभन्दा सांसद माथि ?
संविधानले विधिको शासन चलाउने निर्देश गरेको छ र संविधानभन्दा माथि कोही छैन, सबै संविधान अन्तर्गत हुनेछन् भनेको छ । तर विधि निर्माता सांसदहरुले संविधानभन्दा माथि सांसद छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
यसकारण आइन्दा कुनै फौजदारी अभियोग लागे पनि कुनै पनि सांसदले निलम्बन हुनुपर्ने छैन । संसारमै नभएको यो व्यवस्थाले लोकतन्त्र लज्जित हुनपुगेको छ । चमत्कार हुन्छ भनेका नेताहरुले भनेको नयाँ नेपाल यही होला ।
आइन्दा थुनामा पर्दासमेत कुनै पनि सांसदले अपराधवोध गर्नुपर्ने छैन । किनभने सांसदको पद कायम रहनेछ । थुनामा पर्दासमेत सांसद पदको फुर्ति कायम राख्न सांसदहरु सफल भएका छन् । सांसदका कारण राष्ट्रमा अपराध बढ्दै जानेछ । सांसदलाई कानुन नलाग्नेभएपछि सांसदको महत्व बढ्ने भो ।
विधिको शासनमा कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जर्ज अरवेलले भनेझैं केही जनावरहरु बढी बराबर छन् । सांसदहरुले यो कुरा प्रमाणित गरिदिएका छन् । संविधानअनुसार कानुन सबैका लागि बराबर हुनेछ तर सांसदका लागि संविधान बराबर हुनेछैन । संवैधानिक प्रावधान तोड्ने सुविधा तिनलाई छ ।
जनताले विधिको शासनका लागि, लोकतान्त्रिक गरिमा र महिमा कायम गरेर शासन सुशासन सञ्चालन गर्नका लागि भोट दिएका हुन् । त्यही भोटका कारण वर्तमान ओली सरकार दुई तिहाईको बहुमतका साथ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा दह्रो र शक्तिशाली सरकार बनेको छ । यस्तो शक्तिशाली सरकारले विधिमाथि यसरी खेलबाड, संविधानमाथि यसरी खेलाची गर्नु हुनेथिएन ।
अन्तमा, डा.बाबुराम भट्टराई उवाच–
डा.बाबुराम भट्टराईले हिन्दू धर्म विकासको बाधक हो भनेका छन् । उनको यो तर्कको खण्डन गर्दै बुद्धिजीवीहरुले प्रश्न गरेका छन्– हिन्दुधर्म विकासको बाधक थियो भने विश्वका कैयौं मानिसहरु गुफा मैं बस्दा कसरी हिन्दूहरुले भव्य सम्पदा र सभ्यता निर्माण गरे अनि कसरी विश्वलाई ज्ञानको ज्योति बाँडने वेद पुराण जस्ता पुस्तक हजारौं बर्षअघि नै लेखे ? यो प्रश्नको जवाफमा डा.भट्टराई अहिलेसम्म मौन रहेका छन् ।